गृहमन्त्री अगाडी उभिएर मेयर प्रजापतिले भने: दरबारमा बस्नेले टहरामा बस्नेको दुःख बुझ्न सक्दैन — Bhaktapurpost.com
गृहमन्त्री अगाडी उभिएर मेयर प्रजापतिले भने: दरबारमा बस्नेले टहरामा बस्नेको दुःख बुझ्न सक्दैन
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दरबारमा बस्नेले सडक र टहरामा बस्नेको दुःख बुझ्न नसक्ने बताएका छन् । विहीवार भक्तपुरको दरवार क्षेत्रमा आयोजित २२ औं रास्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोहलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख प्रजापतिले भूकम्प पीडितहरूको ब्यथा सरकारले बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
सरकारका गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा मेयर प्रजापतिले भूकम्पमा भत्किएका जनताको घर अझैपनि बन्न नसकेको बताए । पुन:निर्माणमा राज्यले दिने अनुदान रकम कम भएकोले वृद्धि गर्नुपर्ने, अनुदान किस्ताबन्दीमा नभई एकमुस्ट दिनुपर्ने र अनुदान वितरणको समय बढाउनुपर्ने उनको माग छ । त्यतिमात्र होइन,घरवारविहीन सुकुम्वासीहरूको निम्ति नेपाल सरकारले नै घर निर्माण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेतर्फ पनि प्रमुख प्रजापतिले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पढ्नुस् उनको सम्बोधनको पूर्णपाठ
वि.स. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनास्वरुप हरेक वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको हो । भूकम्प प्राकृतिक विपति हो । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । समय समयमा भूकम्प आइरहन्छ तर त्यसबाट जोगिन पूर्वतयारी आवश्यक छ । वास्तवमा भूकम्पले भन्दा हामीले बनाएका कमजोर संरचनाले हाम्रो धनजनको क्षति हुने हो । हाम्रा हरेक संरचना बलियो, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई जनचेतना फैलाउने एक महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ ।
पुनः निर्माणसंगै निजी घर निर्माणमा पनि मौलिकतालाई नगरपालिकाले जोड दि“दै आएको छ । मौलिकता नै हाम्रो पहिचान हो । पुरानो नगरभित्र मौलिक शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीहरुलाई घरको मोहडामा लाग्ने काठ, इटा र झिंगटीको लागि लाग्ने खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत रकम नगरपालिकाले अनुदान दिई उत्साहित गर्दै आएका छौं । हजारौं घरहरु र सम्पदाहरु निर्माण गर्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौति हो । यद्यपिनेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे(रोहित)ले कल्पना गर्नुभएको १०० वर्षपछिको भक्तपुर पुस्तक अनुसार आधार निर्माण गर्ने यो एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा पनि हामीले लिएका छौं ।
विपद् व्यवस्थापनको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन ऐन २०७४ पारित गरी नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन नगरसमिति गठन गरिसकेको छ । विपद व्यवस्थापन कोषको रुपमा रु. २० लाख नगरपालिकाले विनियोजन गरेको र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त रकम पनि त्यही कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नगरपालिकाले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी तीनवटा समूहलाई विपद व्यवस्थापन तालिम दिइसकेको छ ।
नगरभित्र १२२ जना तालिमप्राप्त विपद व्यवस्थापन उद्धारकर्ताहरू तयारी अवस्थामा छन् । त्यसबाहेक विभिन्न संस्थासित समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्युनीकरणसम्बन्धी कार्यहरु पनि गर्दै आएका छौं । भूकम्पबाट क्षति न्युनीकरण गर्न नेपाल सरकार, नगरपालिका र भवन विभागको भवन निर्माण मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्दै आएका छौं ।